Nkuzi nke Android site na ntinye: nweta ihe kacha na ekwentị gị | Gam akporo (Peeji nke 6)
Otu esi egbochi ngwa site na iji data mkpanaka
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na ọnụego data gị na-apụ n'anya ngwa ngwa n'ihi ngwa, n'isiokwu a anyị na-egosi gị otu anyị nwere ike isi gbochie gị ịnweta data mkpanaka.
Etu esi gbanwee akaụntụ Instagram gị na akaụntụ azụmaahịa
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji gbanwee akaụntụ gị na ngwa a gaa na akaụntụ azụmaahịa n'ụzọ dị mfe.
Nyochaa obere batrị Mbuynow YN-035P
Anyị na-etinye Mbuynow mpụga batrị ka ule ahụ, ikike nke 20.000 mAh nwere ike ịkwanye smartphone gị ruo oge 7 n'ebe ọ bụla ị nọ
Esi gbanwee agba agba na ihuenyo na gam akporo
Chọpụta otu anyị nwere ike isi gbanwee agba ọkụ ihuenyo na ekwentị gam akporo anyị na usoro dị mfe.
Kedu ikike obodo nke gam akporo gam akporo dabere?
Chọpụta ihe gbasara akụkụ ndị na - emetụta ndụ batrị nke ekwentị gam akporo anyị yana ihe dị mkpa ịmara.
Debe iwe gị kwa ụbọchị na Harmon, ihe mgbagwoju anya nke ederede egwu
Ọ bụrụ na ị na-achọ egwuregwu Zen iji zuru ike na ụbọchị gị taa, nke a bụ Mmakọ. A puzzle a Music na a mara nnọọ mma visual ịke.
Tojupụtara & Crack bụ a mgbaghoju anya na nke i nwere na-ezukọ ụfọdụ iberibe na-ebu ndị ọzọ
Na Stack & Crack anyị ga-ezukọta ụfọdụ iberibe n'elu ndị ọzọ iji bugharịa ha gburugburu tebụl egwuregwu ma mechaa ọkwa ahụ. Greatdị ọhụụ mara mma.
Etu esi enweta otutu akaụntụ onye ọrụ na ekwentị gam akporo
Chọpụta karịa otu esi enwe ọtụtụ akụkọ njirimara na ekwentị gam akporo anyị maka ọtụtụ ndị ọrụ, ọ bụghị na ụdị niile.
Otu esi egbochi ngwa ma ọ bụ egwuregwu ịmara ebe anyị nọ
Kwụsị ohere ọnọdụ nke ngwa ndị anyị rụnyere na kọmputa anyị bụ usoro dị mfe anyị gosipụtara gị n'isiokwu a.
Esi gbanwee agba nke chats na Facebook Messenger
Chọpụta usoro anyị ga - eso iji nwee ike ịgbanwe agba nke egosiri na mkparịta ụka na Facebook Messenger.
Etu esi gbanwee ikikere nke ngwa na gam akporo
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị n'amaghị ngwa ndị na-enweta data site na ekwentị gị, n'okpuru anyị ga-egosi gị otu esi ama ma gbanwee ha.
Ọ dị mma ikpochapụ oghere na gam akporo na oge niile?
Chọpụta ihe gbasara nsogbu ndị nwere ike ihicha oghere na gam akporo na oge na nsonaazụ ọ nwere.
Chọpụta aghụghọ ndị a iji nweta YouTube na ekwentị gam akporo anyị n'ụzọ dị mfe ma nwekwuo ohere.
Red Siren: Nchekwa oghere, ma ọ bụ gịnị ga-abụ mmalite nke akụkọ ifo agbachitere nke 80s
Site na ịpịgharị n'akụkụ, Red Siren bụ oge agbapụ em nke na-apụ apụ maka eserese ya na gburugburu ebe ọdịnihu kwesiri ịhụta.
Esi lelee ma ọ bụrụ na akaụntụ Google gị abanyela
Chọpụta otu anyị nwere ike isi mara ma ha abanyela akaụntụ Google anyị yana otu esi echekwa akaụntụ ahụ nke ọma.
Bunnymare: cuszọ mgbapụ Circus bụ egwuregwu zuru oke maka agụụ Lemmings
Bunnymare bụ egwuregwu nke Lemmings sitere n'ike mmụọ nsọ, ọ bụ ezie na ọ na-enye ya aka ya iji kpọga anyị ụwa nke ọgbọ egwuregwu ahụ.
Etu esi ewepu akara egwuregwu na Google Play Games
Chọpụta otu ị ga-esi ehichapụ ọganiihu egwuregwu gị site na iji Google Play Games na ekwentị gam akporo gị.
Neon mgbawa na ihuenyo mkpanaka gị na Nchekwa Oghere Na-adịghị Kwụsị
Nnọọ ihe ngosi nke ga-agafe na ihuenyo nke mkpanaka gị na egwuregwu a na-akpọ Oghere Nchekwa Na-adịghị Akwụsị. A ogologo oge ịse 'em elu.
[APK] Otu esi egwu Minecraft n'efu
Ọ bụrụ n'ịchọrọ igwu Minecraft n'efu na mkpanaka gị ma nwee ọ allụ ụwa niile nke nnukwu egwuregwu a, dịka ụwa mmiri ya, egbula oge n'ịgụ anyị.
Otu esi eme ka isiokwu gbara ọchịchịrị nke Evernote rụọ ọrụ: ozi ọma nke ngwa ndetu
Anyị na-egosi gị otu esi eme ka isiokwu gbara ọchịchịrị nke Evernote rụọ ọrụ nke na-ejikwa ịnye ahụmịhe ọzọ na-atọ ụtọ karịa isiokwu oghere.
Facebook Messenger na-ewebata nhichapụ ozi
Choputa ihe banyere nhichapụ ozi ohuru nke na abia na Facebook Messenger ma mee ihe n’ile gam akporo.
Etu esi wunye ụdị nke uwa MIUI 10 na Xiaomi Redmi Rịba ama 4, Redmi Rịba ama 4X na Redmi Rịba ama 6 Pro
Anyị na-enye gị njikọ nbudata na ntinye nke MIUI 10 Global Stable maka Xiami Redmi Rịba ama 4, Redmi Rịba ama 4X na Redmi Rịba ama 6 Pro na anyị kọwara otu esi etinye ROMs.
Yiri OS H: versiondị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ
Chọpụta akụkọ niile na-abịa Wear OS H, ụdị ọhụụ nke sistemụ elekere elekere nke a ga-arụ ọrụ n'ihu ọha n'oge na-adịghị anya.
Kedu otu na mgbe iji kwuo aha njirimara gị na Instagram
Chọpụta usoro anyị ga - agbaso iji weghachite ma ọ bụ weghachite akaụntụ Instagram anyị maka ịme hacking ma ọ bụ ị impomi.
Etu esi enwe mkparịta ụka nkeonwe na Facebook Messenger
Chọpụta ihe banyere otu ị ga-esi nwee mkparịta ụka nkeonwe na izo ya ezo na njedebe na Facebook Messenger.
Ahapụla zombie na Don Zombie
Don Zombi bụ egwuregwu zombie nke anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara ịhapụ zombie ọ bụla. Ntị ya anya aesthetics.
Kedu otu ọnọdụ abalị dị egwu "Night Night" nke Google Pixel na-arụ ọrụ
A na-ahụ anwansi nke ọnọdụ abalị abalị nke Pixel na algọridim na ngwanrọ nke nnukwu Google mepụtara.
[APK] Budata ugbu a beta 0.9.5 nke PUBG Mobile nke na-amalite oge ọhụrụ
Oge ohuru a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe a na Tencent Games na-akwadebe maka ịnụ ụtọ ya na beta ọhụrụ 0.9.5 nke ị nwere.
Etu esi ekekọrịta intaneti na ama gị
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkesa njikọ data data nke ama gị, n’isiokwu a anyị na-egosi gị otu esi eme ya ngwa ngwa ma dịkwa mfe.
Huawei Pụrụ iche: Otu ndabere na Pendrive nzọụkwụ site nzọụkwụ
Otu esi achọpụta ma ọ bụrụ na ị nwere ngwa ọjọọ na ekwentị gam akporo gị
Chọpụta otu ị ga - esi chọpụta ma ọ bụrụ na inwere ngwa ojoo na ekwentị gam akporo gị yana usoro ị ga - agbaso na ikpe ahụ.
Etu esi dezie ozi na Telegram iji mee ka ha doo anya
Chọpụta ihe banyere ụzọ anyị nwere ike ime ka ozi na Telegram uzo, na ọtụtụ mfe nzọụkwụ na ngwa.
Esi gbanyụọ vibration keyboard na gam akporo
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị igodo keyboard obi ụtọ oge ọ bụla ị pịnyere, n'isiokwu a anyị ga-egosi gị otu esi gbanyụọ ya.
Etu esi emegheghe onye na Instagram
Chọpụta karịa otu anyị nwere ike isi kpọghee ndị ọrụ ndị ọzọ na Instagram na usoro ole na ole.
Fụọnụ ọtụtụ narị ihe mgbochi na Bang Blocks
Bang The Blocks na-etinye gị n’ihu ntiwapụ nke ọtụtụ blocks ga-anwa iwepụ ụfọdụ n’ime obi 3 ị nwere ndụ.
Etu esi ejikwa gam akporo 2 a mee ihe n’ụzọ di egwu
Ngwa 2 a na - akpọ Fingerprint Swipes na mmegharị Edge nke na - enyere gị aka ijikwa gam akporo gị site na mmegharị n’ụzọ ị na - echeghị.
[APK] Otu esi ebudata ma wụnye igwefoto Pixel 3 na Pocophone F1 na Xiaomi Mi 8
Ngwa apk maka igwefoto Google Pixel 3 dị ugbu a maka nbudata na ntinye na Pocophone F1 na Xiaomi Mi 8.
Etu esi eji pinning na Android
Chọpụta uru nke ọrụ ntụtụ ihuenyo na gam akporo yana otu ị nwere ike isi rụọ ọrụ ya na ekwentị gị.
Etu ị ga-esi mee ka otu ụzọ rụọ ọrụ na gam akporo ọ bụla na Cursor Reachability
Site na ngwa a na-akpọ Reachability Cursor ị nwere ike ịnwe ọnọdụ otu aka na ekwentị gam akporo gị n'echeghị maka mmelite gam akporo.
Etu esi eme ka isiokwu gbara ọchịchịrị na ngwa Ndi ana-akpo
N'ime afọ abụọ gara aga, anyị ahụla etu igwe nledo ekwentị si bụrụ otu akụkụ ...
Ngwunye Ọkụ 3D na-egosipụta ịma mma na ị addictionụ ọgwụ ọjọọ nke na-akpali akpali
Ngwunye Ọkụ 3D dị ebe a iji nọrọ ogologo oge na egwuregwu egwuregwu na-eri ahụ na nnukwu ihe ọhụụ. Ntinye anya n'enweghi obi abụọ.
Gam akporo Q ga-abata na ndozi na ihuenyo gbawara agbawa
Gam akporo Q ga-abịa na ndozi na ihuenyo ngosi. Mụta nkọwa nke atụmatụ ọhụrụ nke usoro Google na-esote ga-anabata.
Naanị Apollo Launcher. Free, na-enweghị mgbasa ozi na nnukwu maka gam akporo ọ bụla
Usoro iji nweta ihe na Google Pixel 3 na 3 XL
Chọpụta aghụghọ ndị a iji jiri Google Pixel 3 na 3 XL mee ihe n'ụzọ dị mfe. Ga-enwe ike iji ekwentị ndị ka mma.
Atụmatụ iji nweta ọtụtụ Google Maps
Chọpụta ọrụ kacha mma anyị nwere na Google Maps, nke ị nwere ike iji nweta ngwa ngwa ịgagharị.
Na Crazy Dino Park ị ga-ejikwa ogige ntụrụndụ dinosaur dị egwu
Ogige Crazy Crazy na-etinye gị n'ihu njikwa nke ogige ntụrụndụ, na-echefughị ​​ihe a na-egwupụta ọkpụkpụ dinosaur dị ka egwuregwu ọzọ.
'Slọ ọrụ dị mfe nke ngwa maka kọntaktị, ndetu ihe, nchọgharị faịlụ, ebe eserese eserese na ịbịaru
Otu ụlọ ọrụ 5 mepere emepe sitere na Mfe na-enye gị ohere idetu, see, nyochaa faịlụ, jikwaa kọntaktị gị ma ọ bụ lelee foto gị.
Offọdụ ebe amaara amara nke PUBG Mobile sitere na Chernobyl
A na-achọpụta ụfọdụ saịtị ndị mara mma na PUBG Mobile Erangel map dị ka esi na Chernobyl isi osisi.
Amazon Alexa Vs Google Assistant, duel nke ndị na-enyere aka na gam akporo
Usoro kachasị mma iji hazie Gmail na gam akporo
Chọpụta nhọrọ aghụghọ ndị a iji hazie iji Gmail na ekwentị gam akporo gị n'ụzọ dị mfe ma nweta ọtụtụ ngwa ahụ.
Otu esi gbanyụọ nbanye na Google Chrome
Chọpụta usoro iji gbanyụọ ntinye aka na Google Chrome na ekwentị gam akporo gị. Ọrụ na ndabara.
Otu esi eme ka nyocha nke ịzụta na Google Play
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji rụọ ọrụ nyocha nke ịzụrụ na Google Play ka ha wee ghara ịzụta ngwa na-enweghị ikike gị.
Otu esi egbochi mmelite Play Store site na itinye data ekwentị
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ịhụ otu data ọnụọgụ gị si efe, ị kwesịrị ịmalite site na ịgbanwe ọrụ ndị gam akporo nwere ike ịnweta ha.
Etu esi agbanye ma ọ bụ gbanyụọ nyocha anwansi na gam akporo
Chọpụta usoro anyị ga - agbaso iji rụọ ọrụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ nyocha na ekwentị gam akporo anyị n'ụzọ dị mfe.
Chebe isi gị site na ọtụtụ zombies na Survival City
Vlanahụ City bụ egwuregwu ntọala ụlọ nwere isi ya pụrụ iche. Chebe na isi si zombie agha.
Esi gbanwee font size na gam akporo
Choputa otu anyi g’esi hazie font nke gam akporo ekwentị anyi iji mee ka o di nma iji.
Igwe okwu Spoorky bụ ihe ịtụnanya: mepụta ọkwa gị ma kpọọ ndị egwuregwu ndị ọzọ
Ọ bụrụ na ị na-achọ oké platformer, nke a bụ Spoorky. O nwekwara ọtụtụ ihe na ndị editọ ọkwa maka ndị ọzọ igwu egwu ma nwee ọ .ụ.
Gịnị bụ bloatware na gam akporo?
Chọpụta ihe banyere bloatware na ihe kpatara na ọ dị na ekwentị gam akporo gị. I gha amata karie ihe okwu a bu.
WhatsApp ga-ehichapụ ozi gị na November 12?
Chọpụta karịa banyere otu esi egbochi WhatsApp ka ihichapụ nkwado ndabere gị echekwara na Google Drive.
Etu esi wụnye gam akporo 9 achịcha na Sony Xperia XZ Premium, XZ1 na XZ1 Compact: ụdị ọhụụ na-abịakwute ụdị ndị a
Ezigbo ozi ọma, ndị mmadụ. Ngwunye gam akporo na-abịa na Sony Xperia XZ Premium, XZ1 na XZ1 Compact. Anyị na-egosi gị otu esi etinye ya na ngwaọrụ gị.
Ejiri agba agba agba agba agba
Paint Hit na-enye gị ka ị were aka gị tee agba ahụ ma tee ọtụtụ ọkpọkọ maka agwa dị mma ma na-atọ ụtọ na-enweghị oke ọfụma.
Knights & Dungeons is a Devilish action RPG na ọtụtụ etoju na a otutu na-eme
Knights & Dungeons bụ RPG nke ndị anyị na-achọ ịlafu onwe anyị ọtụtụ awa, kpochapụ ọtụtụ narị ndị iro ma chịkọta ngwongwo akpọrọ akpọrọ.
[APK] Otu esi enweta ọnọdụ Top Shot nke Pixel 3 na Google Pixel 2
Ntụziaka dị mfe nke anyị na-akọwa otu esi enweta Top Shot nke Pixel 3 na Pixel 2 site na nbudata na ịwụnye ngwa.
Ochontera aesthetic maka GlowGrid 2, ihe omimi nke Tetris dere
GlowGrid 2 bụ egwuregwu egwuregwu egwuregwu nke anyị ga-ejikọ Tetris iberibe na bọọdụ nke dị iche na otu n'ime egwuregwu kachasị egwu.
Akwụkwọ mmado kacha mma maka WhatsApp
Ugbu a ị nwere ike ịnweta akwụkwọ mmado kachasị mma maka WhatsApp site na nnukwu ọhụụ na mbata nke nnukwu atụmatụ a pụtara.
Nke a bụ otú Amazon Alexa nnyemaaka na-arụ ọrụ na m gam akporo
Google na-ebipụta akụkọ ọhụụ banyere gam akporo
Chọpụta karịa gbasara akụkọ nchedo a nke Google bipụtara na steeti nchekwa gam akporo taa.
Etu ị ga-esi nwetaghachi ihe ederede na WhatsApp
Chọpụta ụzọ dị iche iche esi eweghachite ihe ederede na anyị ehichapụla site na ndudue na WhatsApp na gam akporo.
Development nhọrọ na-enweta ihe na gị gam akporo ekwentị
Chọpụta nhọrọ atọ ndị a iji nweta ọtụtụ ekwentị gam akporo gị n'ụzọ dị mfe yana ọrụ ndị ọzọ.
November nche nche maka Galaxy Note 8 dị ugbu a
The Korean ụlọ ọrụ Samsung ka tọhapụrụ ndị kwekọrọ ekwekọ nche update maka ọnwa nke November maka Samsung Galaxy Cheta 8.
[APK] can nwere ike ibudata SEGA Heroes maka gam akporo na Sonic na ọtụtụ ndị ọzọ
Ndị SEGA Heroes bụ egwuregwu emere site na ncha site n'aka ụlọ ọrụ ama ama. Na Candy Crush Saga biara ohuru ohuru a nwere otutu ebumnuche.
Otu esi eme ka gam akporo gi buru Oneplus 6T
Etu ị ga-esi zoo akụkọ Instagram gị na ụfọdụ ndị mmadụ
Chọpụta otu ị ga - esi zoo akụkọ Instagram ka ụfọdụ ndị na - eso ụzọ gị ghara ịhụ ha.
A gam akporo ngwa ọdịnala ga-emelite ka ị na-eji ha
Chọpụta API ọhụrụ maka ngwa gam akporo nke ga-enye gị ohere imelite ha mgbe ị na-eji ha ma gosipụta mmelite ọkwa.
Otu UI: Samsung ọhụrụ interface
Chọpụta ihe banyere Samsung ọhụrụ One UI interface, nke e gosipụtara n'ihu ọha na mmepe Mmepụta ogbako.
Mophie weputara ikpe batrị maka 9 Galaxy Note
Onye na-eme ihe batrị Mophie webatara ihe ọ Juụ Juụ ihe ọ Juụ Juụ nke ihe ọ Packụ Juụ maka Samsung Galaxy Note 9
Mee ka mgbakọ na mwepụ gị site na ịpị ihe ochie RPG Math na ịgba afa
A retro RPG akpọ Math na ịgba afa nke ị ga-ọzọ ịmụta mgbakọ na mwepụ arụmọrụ dị ka mgbakwunye, mwepu ...
Etu ị ga - esi zoo TidyPanel iji zoo ihe mgbakasị iwe
TinyPanel bụ ngwa na-enye gị ohere izochi amamọkwa ndị na-ewute gị ịnwe ọkwa ọkwa dị ọcha na ekwentị mkpanaaka gị.
Nexus 6P na Nexus 5X na-enweta mmelite ọhụrụ ha
Chọpụta karịa gbasara mmelite nche kachasị na Nexus 6P na Nexus 5X na-anata ugbu a ọ na-egosi akara nkwado.
Caprice, ngwa redio echefuru echefu site na ụdị na - enweghị mgbasa ozi
Otu esi emepụta akwụkwọ mmado maka WhatsApp n'ụzọ dị mfe
Etu ị ga-esi weghachite gam akporo gam akporo gị ma ọ bụrụ na echefula ụkpụrụ ahụ ma ọ bụ okwuntughe
Chọpụta otu ị ga-esi nwetaghachi ekwentị gam akporo anyị ma ọ bụrụ na anyị efunahụ okwuntughe ma ọ bụ ụkpụrụ ekwentị.
Kedu ihe dị iche n'etiti imechi ma ọ bụ ihi ụra ngwa na gam akporo
Chọpụta ọdịiche dị n'etiti imechi na ihi ụra ngwa na gam akporo, ka anyị wee mara ọdịiche dị n'etiti okwu abụọ ahụ.
Esi ewepu foto na usoro okirikiri na gam akporo
Ihe bara uru ma dị mfe nke anyị na-akọwa etu ị ga-esi belata foto na usoro okirikiri na gam akporo site na Circle Cutter.
Nyere Red aka laghachite ụwa ya ọ hụrụ n'anya Orbitus na Ndị dike
Nyere Red na ndị enyi ya aka ịtọhapụ ụwa Orbitus na egwuregwu dị jụụ a na-akpọ Ndị dike. Nweta site na Playlọ Ahịa Google.
Otu esi emezi ma gbanwee nhọrọ ụda nke Samsung Galaxy ọ bụla na Onye na-enyere aka
Onye na-enyere aka na ụda bụ ngwa sitere na Samsung n'onwe ya nke na-agbakwụnye ọtụtụ mgbakwunye iji chịkwaa ụda dịka ị masịrị gị na Galaxy.
Ekwentị Huawei nke na-emelite EMUI 9.0 n'izu a
Chọpụta ekwentị ndị dị na katalọgụ Huawei na Honor ga-emelite izu a na gam akporo Pie na EMUI 9.0. na ọkwa.
Etu esi eji igwe ojii Telegram. Free na-akparaghị ókè nchekwa maka ihe ọ bụla ị chọrọ ịzọpụta !!
Aghụghọ iji nweta ihe na Gboard na gam akporo
Chọpụta aghụghọ ndị a ị ga-esi nweta Gboard na ekwentị gam akporo anyị ma jiri keyboard ahụ n'ụzọ ka mma.
Esi atụgharị gị gam akporo na ihuenyo ka oji na ọcha
Chọpụta ụzọ dị mfe ị ga-esi gbanye ihuenyo ekwentị ekwentị gị gaa oji na ọcha n'ime usoro ole na ole.
Oge a na mma agha na-efe ọgụ na Agụụ Agha, nke ọhụrụ site na ndị okike nke Zombie Age
Ọ bụrụ na ị gbara Zombie Age 2, ị ga-ahụ ọtụtụ ihe, mana na oge ochie na ọtụtụ mma agha, orcs, na ndị ọzọ na Agụụ Agha.
Dejupụta karama mmiri gị n'efu na Mgbata: ngwa dị ezigbo mkpa iji belata plastik
Mgbidi chọrọ iji belata plastik kwa ụbọchị maka karama mmiri site na inye mmeju n'efu.
Baa obubata, a dị nnọọ iche nkwụnye maka gị gam akporo
Otu esi ehichapụ akụkọ ihe mere eme na Facebook
Chọpụta usoro iji kpochapụ akụkọ ntanetị Facebook nke na-edekọ mmegharị anyị niile. Omume site na gam akporo.
Etu ị ga-esi weghachite okwuntughe echekwara na gam akporo gị
Chọpụta ụzọ iji nweta okwuntughe niile ị zọpụtara na ekwentị gam akporo gị maka Google's Smart Lock.
Aghụghọ na-ana gị gam akporo ekwentị ngwa ngwa
Chọpụta usoro aghụghọ ndị a iji kwụọ ekwentị gam akporo gị ọsọ ọsọ ma si otú a chekwaa oge ma ọ bụrụ na ịnweghị ụgwọ ngwa ngwa.
Ndụmọdụ iji kpochapụ ekwentị gam akporo gị n'ụzọ kachasị mma
Chọpụta ụzọ kachasị mma anyị nwere ike isi kpochaa ekwentị gam akporo anyị na usoro dị mfe na enweghị imebi ekwentị.
Esi gbanwee aha ekwentị gị iji mata ya na Google Play
Chọpụta otu anyị nwere ike isi gbanwee aha ekwentị anyị na Google Play iji mata nke ọma.
Ngwa kachasị mma ịdekọ oku na gam akporo
Chọpụta ihe banyere ngwa ndị a ga-enye gị ohere ịdekọ oku na gam akporo na ụzọ dị mfe. Ha niile nwere onwe ha.
Na-alụ ọgụ na ọkpọ gị na kicks megide ndị ọzọ egwuregwu na ezigbo oge na Rumble Arena
Rumble Arena sitere na nnukwu Nintendo Super Smash Bro iji weta ụdị ọgụ a na ekwentị gam akporo gị.
Etu esi wụnye keyboard ọhụrụ na ekwentị gam akporo gị
Chọpụta otu anyị nwere ike isi gbanwee ahụigodo anyị ji na ekwentị gam akporo anyị, yana ụfọdụ nhọrọ dịnụ.
Dobe igbe ndị ahụ kpọmkwem n'oge kwesịrị ekwesị na Swing!
Ngabiga! Ọ bụ ihe dị mfe nghọta dị mfe, mana ọ na-esiri ya ike ijide ya ma gbalịa idobe igbe ndị ahụ nke ọma.
Etu esi echekwa ma jikwaa okwuntughe na Google Chrome maka gam akporo
Ntụle dị mfe ma dị irè nke anyị na-egosi gị otu esi echekwa ma jikwaa okwuntughe na cents na Google Chrome maka gam akporo.
Ndụ batrị nke ụfọdụ ekwentị ọhụrụ emebiwo karịa ndị bu ha ụzọ
Ọrụ batrị nke ngwaọrụ ọhụrụ agbadaala karịa ndị bu ha ụzọ. Anyị na-enye gị data nke ule a nyere.
Esi ewepu mkpọchi kaadi SIM na gam akporo
Chọpụta otu anyị ga - esi wepu mkpọchi SIM na ekwentị gam akporo gị ma si otú a ghara iji koodu PIN.
More swiiti si King na Candy Crush Enyi Saga
Eze na-eweta aha ọhụụ ọhụrụ nke iji jikọta ọtụtụ narị puku candies na Candy Crush Friends Saga. N'ihi na ihe niile Fans.
Blizzard mara ọkwa Immortal Diablo, ọdịda nke ekwentị nke otu n'ime sagas kachasị akụkọ ifo.
A na-atụ anya na Blizzard ga-adaba na ngwaọrụ mkpanaka site na egwuregwu nke sitere na ọkọ. Ekwensu anaghi anwu anwu. Debanye aha ugbu a.
Eze ajụjụ gaghachi na 2 A jụrụ
Jụrụ 2 laghachi na ọtụtụ ajụjụ na nnukwu mmezigharị na ụdị ihe osise iji soro atụmatụ nke ngwa na egwuregwu.
Esi dezie isiokwu na Telegram
Chọpụta otu anyị nwere ike isi dezie gburugburu na Telegram ngwa anyị gam akporo ekwentị ma si otú hazie ya interface.
Nwunye 20 Pro na-anata EMUI 9.0.0.126 nwere ọtụtụ ndozi: anyị kọwara otu esi etinye ya
Huawei Mate 20 Pro na-anata EMUI 9.0.0.126 site na mmelite ohuru. Anyị na-akọwa otu esi etinye ya na ngwaọrụ gị.
Etu esi etinye ụdị OxygenOS 9.0.2 ọhụrụ na OnePlus 6
OxygenOS 9.0.2 dị ugbu a maka OnePlus 6 nwere ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ na mmelite. Anyị na-akọwa otu esi etinye ya na ngwaọrụ ahụ.
Jikwaa ụgbọ elu gị na Air Combat Pilot chịrị mbara igwe nke Agha Warwa nke Abụọ: WW2 Pacific
Ọgụ Ikuku Ikuku: WW2 Pacific na - etinye gị na njikwa ụgbọelu dum maka ọgụ ikuku ikuku nke World War II na gam akporo gị.
Etu esi kenye vidiyo IGTV na Akụkọ gbasara Instagram: ihe dị ọhụrụ na netwọkụ mmekọrịta
Instagram agbakwunyela arụmọrụ ọhụrụ na ngwa ahụ, ọ bụ ịkekọrịta vidiyo IGTV na Akụkọ. Anyị na-akọwa otú.
Google Play jụrụ ngwa ndị anaghị edozi maka gam akporo 8.0 Oreo
Ngwa ndị dị na Google Play nwere ka ịkacha mmelite na gam akporo 8.0 Oreo. Chọpụta ihe gbasara iwu ụlọ ahịa ngwa ọhụụ maka ngwa.
Na-asọ mpi na oge egwuregwu ọtụtụ egwuregwu na Golf Battle
Golf Battle bụ egwuregwu ọtụtụ egwuregwu nke ị ga-eche ihu na ndị ọzọ na egwuregwu oge. Ọ nwere ọtụtụ ụdịdị na ọtụtụ ọdịnaya.
Otu esi ezo ma ọ bụrụ na ejikọrọ gị na Facebook Messenger
Chọpụta otu esi zoo ọnọdụ gị n'ịntanetị na Facebook Messenger ka onye ọ bụla ghara ịhụ ọkwa gị n'ịntanetị.
Flippy Skate bụ ọhụụ ọhụụ si Egwuregwu Ketchapp iji rie ke jiffy
Ngwa ngwa ngwa, Flippy Skate bụ ihe ọhụrụ site na Ketchapp Games, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe ka ọtụtụ n'ihe ndị anyị nwere na gam akporo.
Gaa na mbara igwe ya na Ava Airbone hang glider
Ọ ga-adị na gị glider na-enyere Ava na Ava Airbone ka ị ga-ebili na mbara igwe iji nyere gị aka site na ifufe na-enweta kacha anya.
Gịnị bụ WiFi AC na gịnị kpatara ọ ji dị mma iji ya
WiFi AC: Kedu ihe ọ bụ na uru ndị ọ na-enye anyị. Chọpụta karịa ihe ọkọlọtọ a pụtara na elele dị n'iji ya na gam akporo.
Etu esi ogbi kọntaktị na Instagram
Chọpụta karịa banyere otu esi emechi ọnụ na kọntaktị na Instagram. Ekele maka ọrụ a ị ga-akwụsị ịhụ mbipụta site na kọntaktị.
Google na-ahọrọ ngwa kachasị mma emere maka gam akporo nke 2018
Choputa ngwa gam akporo ndi meriri na ihe nchoputa ihe nke 2018 na ihe kpatara ya.
Ihe omimi MMORPG RuneScape dị ugbu a na gam akporo
Nnukwu MMORPG na-alaghachi na ntụ ozugbo na ngwaọrụ gam akporo gị: RuneScape. Soro ndị obodo gị gwuo egwu n'efu.
Etu esi wụnye beta 9.0 achịcha beta n'okpuru MIUI 10 na Pocophone F1
Nkuzi nke anyị ji kọwaa otu esi etinye A gam akporo na Pocophone F1. Versiondị ọhụrụ a na-abịa n'ụdị beta maka ngwaọrụ yana n'okpuru MIUI 10.
Etu ị ga - esi kwalite nkwenye ụzọ abụọ na Facebook, Twitter na Instagram
Chọpụta otu esi eme ka nkwenye nkwenye abuo rụọ ọrụ na Facebook, Instagram na Twitter iji melite nchekwa nke akaụntụ njirimara gị.
Nweta ihe ntanye iPhone XS MAX maka obere oge
Etu esi emepụta Emoji Mini gị na atụmatụ ọhụrụ na Gboard
Etu esi eji Gboard mepụta emojis gị omenala. Chọpụta ọrụ ọhụụ nke ngwa keyboard ma mepụta emojis gị.
Etu esi eji WhatsApp Web na kọmputa ọ bụla
Ntụziaka dị mfe nke anyị na-akọwa otu esi eji WhatsApp Web site na kọmputa ọ bụla n'ụzọ dị mfe, ngwa ngwa na nke bara uru.
Otu esi eme ka isiokwu gbara ọchịchịrị nke Google Maps igodo rụọ ọrụ: ihe dị ọhụrụ na ngwa maapụ
Emegharịrị Google Maps ka ị nwee ike gbanye isiokwu gbara ọchịchịrị maka igodo. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịnwe ụdị ejiji ahụ.
Etu esi egwu Google's Multiplayer Game for Halloween
Ọ dị maka ngwaọrụ niile nwere ike ịnwe ihe nchọgharị weebụ iji malite egwuregwu ọtụtụ egwuregwu Google maka Halloween.
A 5-kpakpando ngwa n'ihi na arụpụtaghị !!
Etu esi kenye otu foto na ozi nzuzo na Instagram
Chọpụta otu esi ekekọrịta foto na Instagram site na ozi nzuzo. Ga-enwe ike ịkekọrịta akwụkwọ n'etiti ndị akpọtụrụ gị.
Otu esi ehichapụ ndị na-eso ụzọ na akaụntụ Instagram gị
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji wepụ onye na - eso ụzọ na Instagram. Kọwaa nzọụkwụ site na ntinye na ngwa ahụ.
Kedu ihe nkwenye ụzọ abụọ yana otu esi rụọ ọrụ na Google
Nkwenye uzo abuo: Kedu ihe ọ bụ na otu esi arụ ọrụ na Google. Chọpụta ihe banyere usoro nchekwa a na otu esi eme ya.
Esi melite akaụntụ email iCloud na gam akporo
Ọ bụrụ na ị na-aga site na inwe iPhone ekwentị na gam akporo, ihe kachasị mma bụ ime ya na akaụntụ iCloud. Anyị na-akọwa otu esi ahazi ya.
Kpochapu Eze Mummy na ndị agha nke nnukwu anụ na retro Turn Undead 2
Kwadebe ọtụtụ puku osisi iji bibie ndị agha Mummy King nke ọchịchịrị na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ Turn Undead 2 si Nitrome.
Etu esi egbochi kuki na ozi nzuzo site na iji Opera Browser
Ọ bụrụ na ike gwụrụ kuki na ozi nzuzo, n'isiokwu a anyị na-egosi gị otu anyị nwere ike isi zere ha maka ọrụ ọhụụ nke ihe nchọgharị Opera
Motorola weputara Android Oreo 8.1 maka Moto G5 na G5 Plus
Emeputa Motorola ka tọhapụrụ melite gam akporo Oreo 8.1 maka ụdị Moto G5 na Moto G5 Plus.
[APK] Otu esi enwe 'Super zoom' nke Google Pixel 3 na Pixel 2
Anyị na-egosi gị otu ị ga - esi nwee otu ọrụ pụrụ iche nke Pixel 3 na Pixel 2 gị wee were foto dị ịtụnanya.
Olee otú izipu ozi «m WhatsApp»
Google na-ekpochapụ olu gam akporo na-emeghe dika enweghị nchebe
Ha anọwo na Pixel 3 ebe achọtara ọrụ ọhụụ na-anọchi mkpọchi olu. N’oge na-adịghị anya ọ ga-abata na ụdị Google ọhụrụ.
Etu ị ga - esi mara ma ọ bụrụ na mmadụ na - achọ gị na Google site na iji Alerts Google
Chọpụta ụzọ anyị ga-esi mara ma ha jiri Google Alerts chọọ anyị na Google. Oge ọ bụla ha chọrọ gị, ị ga-enweta ịdọ aka ná ntị.
Etu esi ahụ ụdị ngwa nke awụnyere na gam akporo
Chọpụta ụzọ iji mara nke ọma ụdị ụdị ngwa ị rụnyere na ekwentị gam akporo gị. Kọwaa nzọụkwụ site na nzọụkwụ.
Kedu ihe na ihe njikwa okwuntughe nke gam akporo?
Ndị njikwa okwuntughe: Kedu ihe ha bụ na gịnị ka ha bụ? Chọpụta ihe banyere ngwa gam akporo ndị a na-enyere anyị aka ijikwa okwuntughe.
Choputa ihe banyere komputa ohuru nke Android nke Google biputara nke Android Oreo ji buru uzo nke abuo eji.
Esi esi abanye na Facebook Messenger na gam akporo
Esi esi abanye na Facebook Messenger. Chọpụta usoro iji pụọ na ngwa izipu ozi na gam akporo.
Otu esi agbachi ekwentị gam akporo ezuru
Chọpụta otu esi akpọchi ekwentị gam akporo gị ma ọ bụrụ na ezuru ya, ka onye ọbụla ghara ịnwe ngwaọrụ na faịlụ ya.
Kpoo okwu di omimi site na iji ihe omuma geometric mee ihe na mmegharị anya
Jikere ise geometric shapes na ihuenyo na mmegharị na Swipe Ime Anwansi. Egwuregwu dị nnọọ egwu site na mmalite.
Esi mara ma ọ bụrụ na batrị ekwentị gam akporo gị dị mma
Chọpụta ụzọ anyị nwere iji mara ma batrị nke gam akporo ekwentị anyị ọ dị mma. Abụọ 100% free ụzọ.
Ndị na-agba ịlụ ọgụ na-enye ọgụ dị jụụ ma na-ebupụta ihe mgbochi megide ndị egwuregwu ndị ọzọ
Ndị na-agba ịlụ ọgụ na-atụ aro egwuregwu ọtụtụ ndị egwuregwu megide ndị egwuregwu ndị ọzọ na imegide ọgụgụ isi site na mmalite nke ihe mmemme.
Etu esi ebudata foto, vidiyo ma ọ bụ akụkọ na Instagram
Chọpụta otu esi eji ngwa ndị a na Instagram iji budata foto, vidiyo ma ọ bụ akụkọ na ekwentị gam akporo gị n'ụzọ dị mfe.
Kacha mma nne na nna akara ngwa maka gam akporo
Chọpụta ngwa ndị a ga - enyere gị aka ijikwa ihe ụmụ gị na - eme na ekwentị gam akporo ha oge niile n'ụzọ dị mfe.
Etu esi enweta igwefoto Xiaomi Mi Mix 3 na Mi 8 na Mi Mix 2S
Ciaomi Mi 8 na Mi Mix 2S ga-enweta mmelite dị mkpa nke ga-eme ka ha nwee igwefoto nke Mi Mix 3 emepere nso nso a.
Ike na-enwu, nloghachi nke kpochapụwo na otu esi eme ya
SEGA na-aga n’ihu ịme ọdụ ụgbọ mmiri jọgburu onwe ya nke egwuregwu ndị a ma ama na ndụ. Site na Shining Force anyị anaghị eju anya na ọ na-eme omume ọjọọ ọzọ.
Etu esi tinye akaụntụ Google Chrome ọhụrụ maka gam akporo
N'isiokwu a anyị na-egosi gị usoro niile ị ga - agbaso iji tinye akaụntụ ọhụrụ na Google Chrome ka ịdekọ nyocha na akụkọ ihe mere eme anyị.
Nwee osimiri ya na oke oke aka gi na King of Crabs
Ọtụtụ crabs na ọtụtụ ịlụ ọgụ na-echere gị na egwuregwu dị mma: King of Crabs. Na .io biara egwuregwu a na otutu 3D.
Kedu ihe akara ngosi ọnọdụ WhatsApp pụtara maka ozi
Pụtara nke ozi ọnọdụ akara ngosi na WhatsApp. Chọpụta ihe akara ngosi na-egosi mgbe izipu ozi na ngwa ahụ pụtara.
Ngwa kachasị mma maka hoverboards na Bluetooth
Ihe ise kachasị mma maka hoverboard na Bluetooth. Chọpụta ngwa ndị a ị nwere ike ijikwa hoverboard gị n'ụzọ dị mfe.
Otu esi emepụta mkpirisi ma ọ bụ ụzọ mkpirisi ihe niile na gam akporo na Shorty
Ntụziaka dị mfe nke anyị ji akọwa otu esi emepụta ụzọ mkpirisi na ihe niile dị na mkpanaka gam akporo gị.
Otu esi apụ Google Chrome maka gam akporo
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na Google maara oge niile nke ibe weebụ ị gara, nhọrọ kachasị mma iji zere nke a bụ site na ịpụ na Google Chrome.
5 Alternatives na Google Play Store
[Ngwa] Ngwa kachasị elu iji lelee TV n'efu na ndakọrịta maka Chromecast
Etu esi egwu obodo Salem: Egwuregwu nke enyo, igbu ọchụ na ụgha
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmata etu esi egwu Town of Salem, anyị na-ewetara akwụkwọ ntuziaka a nke bụ akụkụ mbụ nke usoro ọzọ nke isiokwu ndị toro eto.
Esi kpochapụ ihe nchọgharị gị na Google Chrome maka gam akporo
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapụ akụkọ ihe mere eme nke ihe nchọgharị Chrome gị, n'isiokwu a anyị na-egosi gị otu esi eme ya site na nkwụsị.
Budata akwụkwọ ahụ aja nke ọhụrụ Razer ekwentị 2
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ akwụkwọ ahụaja / akwụkwọ ahụaja nke ọhụrụ Razer ekwentị 2 ịgaghị anọgide na-achọ. Lee anyị nwere ha niile.
Esi mee ka WhatsApp rie obere data mkpanaka
Chọpụta usoro ndị a dị mfe iji belata ojiji nke data WhatsApp na ekwentị gam akporo gị. Valid maka nsụgharị niile nke gam akporo.
Etu esi eji ihe eji eme ihe ohuru na GBoard
Chọpụta otu anyị nwere ike isi jiri kọmpụta ọrụ ọhụụ ewebatalarị na ngwa GBoard na gam akporo.
PUBG Ekike ejiji maka Halloween nwere ụdị 0.8.0 nke ejiri ọtụtụ njirimara ọhụụ
Ọnọdụ abalị, ohere igwu egwu na ndị na-asụ otu asụsụ ma ọ bụ skins dị iche iche maka abalị Halloween nke PUBG Mobile.
Etu esi eji akwụkwọ mmado WhatsApp ọhụrụ ma ọ bụ akwụkwọ mmado
Itianya maka WhatsApp aghọwo ihe kachasị ewu ewu na ngwa ngwa ngwa ngwa niile. Mụọ otu esi eji ha na ekwentị gam akporo gị.
Etu esi aguta ozi site na kọntaktị na WhatsApp na mmegharị
WhatsApp e emelitere ụnyaahụ na anụ version otú i nwere ike iji a ogbugbu na-aguputa ozi ma si otú meghachi ngwa ngwa.
Ihe kacha mma gam akporo Launcher !!, ezigbo uzo ozo maka Nova Launcher
Etu ị ga-esi rụọ ọrụ iji kọmputa ede olu na-anọghị n'ịntanetị na GBoard
Etu esi enweta olu na-anọghị n'ịntanetị na GBoard. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ a na keyboard Google na gam akporo.
Kedu ihe ndụdụ gam akporo? Kedu uru ọ na-enye?
Kedu ihe ndụdụ gam akporo na uru ndị ọ nwere. Chọpụta karịa maka uru ha nyere anyị na ihe ndụdụ ndị a dị na gam akporo.
Ọhụrụ Facebook melite na-enye ohere ịgbakwunye egwu na foto na vidiyo
Facebook ga-enye ohere ịgbakwunye abụ na foto na vidiyo. Choputa ihe banyere ihe ohuru a na abia n’oge na adighi anya.
Otu esi eme ka ọnọdụ abalị dị na Samsung Internet Browser
Ọ bụrụ na ị na-eji ihe nchọgharị Samsung mere mgbe niile, ị kwesịrị ịma ọrụ nke na-enye gị ohere ịme ka ọnọdụ abalị rụọ ọrụ, mana n'isiokwu a anyị ga-akọwara gị ya.
Ize Ndụ na-ejide gị na miri emi dunge nke 4Pillars
4Pillars nwere ezigbo ebumnuche yana obere iji meziwanye akụkụ ụfọdụ siri ike nke egwuregwu ahụ, ọ ga-ekwe omume inwe egwuregwu nwere ike itinye.
Esi eme mmemme WhatsApp iji zipu ozi na-akpaghị aka. (Nzọụkwụ vidiyo nkuzi nzọụkwụ)
Otu esi eme ka ịchekwa data na Facebook
Otu esi eme ka ịchekwa data na ngwa Facebook. Chọpụta aghụghọ a ka ịnwere ike ịchekwa na oriri data mkpanaka nke ngwa ahụ.
PAKO Ruo Mgbe Ebighị Ebi na-ewetara gị ihe kasị mma n'ime mkpọ saga na nkịtị
Y’oburu na ichoro ndi uwe ojii n’acho ihe nlere, PAKO Forever bu ihe efu nke biara ebe ahu ka iwere ha nye nebe gi.
Ndị ọzọ kachasị mma na igbe mbata Google
Ihe ise kachasị mma na igbe mbata Google maka gam akporo. Chọpụta karịa gbasara ngwa ndị ọzọ na Igbe mbata. Dị ugbu a.
Samsung batrị graphene ọhụrụ ga-akwụ Galaxy Note 5 10 ugboro ngwa ngwa
Batrị graphene pụtara na ọ ga-akwụ ụgwọ ugboro 5 karịa ngwa ngwa lithium-ion nkịtị. Ọganihu sitere na Samsung iji gbanwee ahịa.
Etu esi ewepu nọmba ekwentị gị na ngwa Facebook. Chọpụta usoro iji kpochapụ nọmba ekwentị anyị na ngwa ahụ.
Etu ị ga-esi nweta GBoard floating keyboard na ekwentị gam akporo gị
Etu esi eji GBoard floating keyboard na gam akporo. Chọpụta otu esi enweta akara ngosi ọhụụ na ekwentị gam akporo gị.
Ngwa kachasị mma iji hazie gam akporo gị na Halloween
Wide nhọrọ nke ngwa, gburugburu, launchers niile ị chọrọ iji hazie gị gam akporo ekwentị a Halloween 2018.
Infinity na karịrị na Cosmobot arcade
Ọ bụrụ na ị na-amasị arcades na ohere gburugburu, ị nọ na chi na Cosmobot, a free egwuregwu na Spanish nke ukwuu mma.
October nche mmelite maka Galaxy Note 8 ugbu a
Companylọ ọrụ Korea bụ Samsung amalitela ịmalite mmelite nche maka ọnwa nke Ọktọba 2018 maka Nkọwa 8
Etu esi edozi email na Gmail maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere ụzọ anyị nwere ike ịkagbu Mbupu kwuru.
Etu esi enyocha akaụntụ gị na Instagram yana ihe achọrọ ka emee. Chọpụta usoro iji nyochaa akaụntụ gị na netwọkụ mmekọrịta.
Ngwa kachasị mma iji lelee ihe nkiri egwu na Halloween n'efu. Chọpụta ngwa gam akporo ndị a iji hụ fim kacha mma na Halloween.
Golfmasters bụ egwuregwu egwuregwu golf kachasị anụmanụ ị nwere ike itu n'ihu gị
Golfmasters bụ egwuregwu golf na-atọ ụtọ na-enwe mmetụta dị egwu dị egwu. Will ga-ahụ ọtụtụ anụmanụ nke savannah iji mee ụzọ kachasị mma.
Aghụghọ iji nweta ihe na Google Maps
Nweta ihe na Google Maps site na usoro a. Chọpụta ihe banyere aghụghọ ndị a ka ị nweta ọtụtụ ngwa.
Bụrụ onye na-arụ ọrụ kreenu na Igwu na: Egwuregwu Egwu
Gwuo: Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu bụ egwuregwu na-atọ ụtọ nke nwere ntakịrị ịme anwansị. Ga-abụrịrị ọkachamara na-egwupụta akụ.
Etu esi ekpochapụ akụkọ ihe mere eme nke Instagram na android. Chọpụta usoro iji kpochapụ akụkọ ọchụchọ a na ngwa ahụ.
Otu esi arụ ọrụ ma jiri ihe mmetụta infrared nke Pocophone F1 dị ka igwefoto
Nkuzi nke anyị na-enye gị usoro a site na otu esi arụ ọrụ ma jiri ihe mmetụta infrared nke Xiaomi Pocophone F1 n'ụzọ dị mfe.
Etu esi enweta akwụkwọ ahụaja dị iche iche kwa ụbọchị na gam akporo
Gbanwee ngwa ahụaja gam akporo gị kwa ụbọchị na ngwa a. Chọpụta ihe banyere ngwa a na-enye gị ohere ịgbanwe akwụkwọ ahụaja.
Samsung weputara mmelite gam akporo dị na mbido 2019
Samsung ga-emelite gam akporo achịcha n'afọ ọzọ. Chọpụta karịa maka ụbọchị ụlọ ọrụ ahụ ga-ewepụta mmelite a maka ekwentị ya.
Maazị Juggler na-atụ aro ka ị bụrụ onye njegharị nke bọọlụ dị iche iche
Maazị Juggler bụ egwuregwu nkịtị nke ị ga-amata otu esi ejikwa onwe gị dịka juggler maka circus. Ezigbo mma egwuregwu egwuregwu.
Esi nyefee mkparịta ụka WhatsApp site na ekwentị gam akporo gaa na onye ọzọ
Esi nyefee mkparịta ụka WhatsApp na ekwentị ọzọ. Chọpụta usoro ị ga - eme iji gafere mkparịta ụka ndị a.
Na-enyo enyo, igbu ọchụ ma chebe ndị ị hụrụ n'anya na Town nke Salem, otu n'ime egwuregwu nke afọ
Town of Salem bụ egwuregwu iri nke ị ga - esonye na izu nzuzo nke obodo iji chọpụta onye bụ onye ọjọọ na onye dị mma.
Nweta ọtụtụ ihe na Waze site na ndụmọdụ ndị a
Atọ atọ iji nweta ọtụtụ ihe na Waze na gam akporo. Chọpụta aghụghọ ndị a iji jiri ngwa gam akporo rụọ ọrụ nke ọma.
Ntụziaka dị mfe nke anyị na-akọwa otu esi eme ka ịchekwa data na Instagram, nzọụkwụ na nzọụkwụ, maka mgbe anyị na-aga na-enweghị Wi-Fi.
Piffle na ụmụ kittens ya nọ ebe a site n'aka ndị okike nke Crossy Road
Oge a anyị gbanwere ọkụkọ maka ụfọdụ kittens mara mma nke ga - enyere anyị aka ịfe ọtụtụ ọkwa na Piffle. Ezigbo egwuregwu.
Nyochaa OUKITEL WP2, nke ahụ jupụtara na ya na batrị na-enweghị ngwụcha
Anyị na-etinye OUKITEL WP2 na ule, "amaala niile" ama ama nwere asambodo IP68 yana nnukwu batrị 10.000 mAh, echefula ya!
Ihe ngosi 3 nke Google Maps kachasị ọhụrụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya
Google Maps na-aga n'ihu na-echekwa atụmatụ ọhụrụ dịka ịkekọrịta ndepụta nke ọkacha mmasị ma ọ bụ ịmara ebe ị ga-akwụ ụgwọ ụgbọ ala eletrik. Enwere ndị ọhụrụ atọ mara ezigbo mma.
Otu esi egbochi igbochi vidiyo na Twitter
Otu esi egbochi vidiyo site na igwu egwu na Twitter. Chọpụta otu esi arụ ọrụ a na ngwa ahụ.
Otu esi ehichapụ akaụntụ Google gị
Otu esi ehichapụ akaụntụ Google gị site na nkwụsị. Chọpụta ihe anyị ga-eme iji hichapụ akaụntụ Google anyị n'ụzọ dị mfe.
Etu esi emepụta foto 3D site na njirimara Facebook ọhụrụ
Etu esi emepụta foto 3D na Facebook. Chọpụta ihe gbasara njirimara ọhụrụ ahụ abatala na ntanetị mmekọrịta na nso nso ị ga-abịa gam akporo.
Etu esi agbanwe asụsụ nke Google Assistant
Etu esi agbanwe asụsụ nke Google Assistant ji. Chọpụta usoro iji nwee ike ịgbanwe asụsụ nke onye enyemaka na-ekwu na ekwentị.
Etu esi arụ ọrụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ Ọnọdụ na Instagram
Zipu nke anyị na-akọwa otu esi arụ ọrụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ Ọkwa na Instagram.
Etu ị ga-esi mee ka Google Chrome rụọ ọrụ na gam akporo
Otu esi eme ka onye na-egbochi mgbasa ozi na Google Chrome. Chọpụta usoro iji rụọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi a na ihe nchọgharị ahụ.
O buru na inwere igwe gam akporo, enwere ugbua inwe Google “Digital Wellbeing”
Nlekọta nke ọma bụ ọtụtụ ngwaọrụ iji chịkwaa oge ị thatụbiga oge anyị na-ejikarị ekwentị anyị.
Etu ị ga - esi cheta oge ọ bụla anyị jiri Google Maps dọba
Site na Google Maps, anyị nwere ike ịmara oge niile ebe anyị kwụsịrị oge ikpeazụ anyị were ụgbọ ala ọsọ ọsọ na mfe.
Na-achị: Egwuregwu nke n'ocheeze na gam akporo: weghara Alaeze asaa mgbe oge ikpeazụ ga-abịa
Ighachị: Egwuregwu nke n'ocheeze ga-enye gị ohere ikpebi ọdịnihu nke alaeze asaa ahụ site na ịkọwa Daennerys de la Tormenta, Jon Snow na ọtụtụ ndị ọzọ.
[APK] Budata ọhụụ ọhụrụ nke Google Keep with a emelitere emelitere gam akporo achịcha
Otu esi eme ka ịchekwa data na Facebook Messenger
Otu esi eme ka ịchekwa data na Facebook Messenger. Chọpụta usoro iji rụọ ọrụ a na ngwa izipu ozi.
[APK] Otu esi eji ọrụ 360º ọhụrụ nke Facebook rụọ ọrụ
Anyị na-alọta na nkuzi nkuzi vidiyo dị mfe, nke m ga-egosi gị otu esi eji arụmọrụ ọhụrụ nke Facebook 360º Foto, nkuzi vidiyo ọhụụ nke m na - egosi gị site na ọkwa otu esi eji ọrụ ọhụrụ nke na - enye anyị ohere. iji were foto 360º na Facebook.
Kpochapụrụ akaụntụ Google gị? Yabụ i nwere ike nweta ya
Etu ị ga-esi weghachite akaụntụ Google gị na usoro atọ. Chọpụta ihe banyere usoro iji nwee ike ịghachite akaụntụ Google anyị mfe.
Etu esi tinye otutu akaụntụ na Gmail maka gam akporo
Ntụziaka dị mfe nke anyị na-egosi gị otu esi tinye ma ọ bụ tinye otu ma ọ bụ karịa akaụntụ na Gmail maka gam akporo, ngwa ngwa mail Google.
The OnePlus 6T ga-abata na a gam akporo
The OnePlus 6T ga-abịa na gam akporo achịcha. Chọpụta ihe banyere ụdị sistemụ arụmọrụ dị elu nke ika ahụ.
Huawei Mate 20 Pro, ihe ngosi mbụ nke nnukwu ọnụ a
Na Androidsis anyị na-ewetara gị echiche mbụ anyị banyere Huawei Mate 20 Pro mgbe ojiji mbụ, nọnyere anyị ma chọpụta.
Ngbanwe ọhụrụ 100 + na mmelite na-abịa PUBG Mobile maka Halloween
Jikere maka Halloween na PUBG Mobile. Anyị nwere ndepụta zuru ezu nke mgbanwe 100 na akụkọ na Spanish ka ị mara mgbanwe ndị ahụ.
Otu esi enweta saịtị dị ka The Pirate Bay, Roja Directa na-enweghị mkpa maka VPN na site na ihe nchọgharị weebụ kachasị amasị gị
Google ga-akwụ ndị nrụpụta ụgwọ iji ngwa gam akporo ya
Ndị nrụpụta ga-akwụ Google ụgwọ maka ngwa gam akporo ha. Chọpụta karịa banyere mgbanwe na iwu ikikere Google na Android.
Etu ị ga-esi mee ka USB debugging na ekwentị gam akporo gị
Otu esi enyere USB debugging na gam akporo ekwentị. Chọpụta karịa maka etu esi arụ ọrụ a.
Otu esi emeghe Windows PC gị na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka nke gam akporo gam akporo gị
Na Remote mkpisiaka Unlock ngwa anyị nwere ike unlock kpọghee ekwt anyị Windows PC na mkpisiaka ihe mmetụta na anyị nwere na anyị gam akporo mobile.
PUBG Mobile nyefere nde 100 nde na Playlọ Ahịa Google Play
Agaghị agụta na ndị na-eso na China, PUBG Mobile na-achịkwa ịgafe nde nrụnye 100 na Playlọ Ahịa Google.
Etu esi hazi amamọkwa na WhatsApp
Esi hazie ozi WhatsApp na gam akporo. Chọpụta karịa otu anyị nwere ike isi hazie amamọkwa ndị a.
Otu esi eme ka ọnọdụ nchekwa batrị dị na gam akporo na ihe ọ bụ maka
Biputere nke anyị na-akọwa ihe batrị ma ọ bụ ọnọdụ nchekwa ike mejupụtara yana otu esi rụọ ọrụ na ekwentị gam akporo gị.
Etu ị ga-esi amata ngwa na egwuregwu niile ị zụtara na Playlọ Ahịa Google
Zụrụ Apps bụ ngwa na-ahapụ gị mara ngwa na egwuregwu ị zụrụ. A free ngwa na-agwa gị niile ego nọrọ.
Otu esi emepụta otu na WhatsApp. (Dezie ya ma hazie ya)
Bipute nke anyị na-enye gị nzọụkwụ site na otu esi mepụta otu na WhatsApp, dezie ya ma hazie ya ka ọ na-akpọtụrụ ọtụtụ ndị n'otu oge.
Ihe nyocha batrị nke edobere Galaxy Note 9 na iPhone XS Max, gosi anyị na Samsung Smartphone bụ onye mmeri doro anya.
Esi gbanwee ihu igwe nke Google Chrome na gam akporo
Esi gbanwee ihu igwe na Google Chrome. Chọpụta ụzọ dị mfe ị ga-esi gbanwee peeji nke ụlọ na ihe nchọgharị ahụ.
Etu esi ebupụ ndepụta ọkpụkpọ Spotify gị
Etu esi ebupụ ndepụta ọkpụkpọ Spotify. Chọpụta ngwa ọrụ kachasị mma iji bupụ ndepụta ndị a na ntanetị.
Etu esi eziga ozi nzuzo na Gmail na gam akporo
Etu esi eji ozi ịntanetị nzuzo na Gmail. Chọpụta otu esi eji ọrụ a na ngwa ahụ.
Otu esi ehichapụ ihe ndekọ olu gị na Google Assistant
Otu esi ehichapụ iwu na echekwara na Google Assistant. Chọpụta ihe banyere otu esi ehichapụ ihe ndekọ ndị a.
Etu ị ga-esi rụọ ọrụ ntụgharị akpaka nke Google Chrome na gam akporo
Otu esi eme ntụgharị asụsụ akpaka na Google Chrome. Chọpụta usoro iji rụọ ọrụ a na ihe nchọgharị maka gam akporo.
Kedu ihe ọ bụ na otu esi budata APK na ekwentị gam akporo anyị
Kedu ihe bụ APK na kedu ka esi ebudata ya na ekwentị gam akporo anyị. Chọpụta ihe gbasara ụdị faịlụ ndị a na otu esi esi budata ha.
Egwuregwu egwuregwu anọ kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a nke egwuregwu nyocha dị na Storelọ Ahịa Play.
30 nde Facebook akaụntụ emetụta mbanye anataghị ikike
30 nde akaụntụ emetụta Facebook mbanye anataghị ikike. Chọpụta karịa gbasara nsogbu nchekwa na netwọkụ mmekọrịta kachasị eji.
Ndị otu nnụnụ na egwuregwu zen dị ukwuu: Skyward Journey with OST nke Jeff Van Dyck dere
Jeff van Dyck na-elekọta ụda ụda mbụ maka Skyward Journey, egwuregwu nke ịchọrọ izu ike n'enweghị ihe ọ bụla.
Etu esi akara mkparịta ụka na WhatsApp ka ị gụrụ
Etu esi eme mkparịta ụka dị ka agụrụ na WhatsApp. Chọpụta ụzọ dị mfe iji kwe ka ewepu ozi a ma ọ bụrụ na anyị agụghị ozi.
Mma agha amamịghe na-alụ ọgụ a la 'Gbuo Bill' na ebube Glory Ages Samurais
Otu egwuregwu kachasị mma nke afọ maka gam akporo bụ Glory Ages Samurais. Teknụzụ ọrụ a rụrụ dị ịrịba ama.
The Xperia XZ2 na XZ2 kọmpat na-amalite ịnata Android Pie
Site na A gam akporo, odi ka Google mechara acho imebi nkewa ozugbo, ma obu ...
Otu esi eme ka ịchekwa data na Twitter
Otu esi eme ka ịchekwa data na Twitter. Chọpụta usoro iji belata oriri data nke ngwa Twitter.
Ngwa kacha mma gam akporo kacha mma iji chọọ ozi
4 Ngwa gam akporo iji chọọ ozi. Chọpụta ngwa ndị a ị nwere ike iji chọọ ozi.
FIFA 19 beta dị maka gam akporo
FIFA 19 dị maka gam akporo na ụdị beta. Chọpụta beta nke egwuregwu bọọlụ ogologo oge ị nwere ike ibudata na ekwentị gị.
Otu esi eme ka nlele desktọọpụ rụọ ọrụ na Chrome na Firefox maka gam akporo
Ihe ngosi nke desktọọpụ nke ndị na-enyocha ihe nchọgharị na-enye anyị ohere ịga na weebụ dị ka à ga-asị na anyị na-eme ya na kọmputa.
Kedu oge nlọghachi na Google Play?
Oge nloghachi niile na Google Play. Chọpụta oge ndị ị ga - enweta nkwụghachi na Google Play.
Etu esi agbanye Netflix na Spotify ọdịnaya site na Google Assistant to Chromecast na ụlọ Google ọhụụ
Jiri iwu olu: "Kpọọ Ihe Ọbịa na thelọ Ndụ" iji zipu Netflix na Spoti ọdịnaya na Chromecast na Google Assistant.
Etu ị ga-esi nweta nkwụghachi na Google Play
Etu ị ga-esi nweta nkwụghachi na Google Play. Chọpụta usoro iji nweta nkwụghachi mgbe ịzụrụ ngwa sitere na ụlọ ahịa ahụ.
O kwere omume ugbu a ibudata Fortnite na-enweghị oku
Fortnite maka gam akporo dị ugbu a na-enweghị oku. Chọpụta karịa gbasara ịmalite egwuregwu nke egwuregwu na-enweghị ịnweta ọkpụkpọ.
Etu ị ga-esi wepu oghere na akaụntụ Google Drive gị
Etu ị ga-esi wepu oghere na Google Drive. Chọpụta ụzọ ị ga-esi hapụ oghere na akaụntụ Google gị n'ụzọ dị mfe.
Etu esi akara okwu n'atụghị egwu, italic, strikethrough ma ọ bụ monospaced na WhatsApp
Nkuzi di mfe nke anyi ji akowa otu esi aju okwu n'olu ike, italic, strikethrough na monospaced na WhatsApp.
Esi gbanye gam akporo gị na Pixel 3
Gbanye na njem Zombie Rollerz pinball RPG
Zombie Rollerz bụ egwuregwu efu nke ị ga - eji ihe gbasara physics kpochapụ zombies niile ahụ na bọọdụ.